Yakanaka-Lume Pro neMediaLight Desk Lamp - MediaLight Bias Mwenje
musha Yakanaka-Lume Pro neMediaLight Desk Lamp
Yakanaka-Lume Pro neMediaLight Desk Lamp
Mutengo wepakutanga $99.95
Mutengo wepakutanga $99.95 - Mutengo wepakutanga $99.95
Mutengo wanhasi $89.95
Iyo Yakanaka-Lume ™ Pro neMediaLight LED tafura yemwenje yakagadzirirwa kushandira kudzora koni nzvimbo yekuvhenekera munzvimbo yakakosha yemavara ekumisikidza enzvimbo dzekugadzira. Iyo yakagadzirirwa kupa yemuno nharaunda kudzika mwenje kunoenderana kune yakakurudzirwa CIE D65 kududzirwa kweiyo ambient kuvhenekera kana uchishanda pane vhidhiyo zvirongwa.
Iyo inobviswa nhema nhema blinder hood inosanganisirwa kudzivirira yekutarisa screen skrini kubva kune maLED. Kudimikira kunopihwa yekugadzirisa kubuda kwechiedza sezvazvinodiwa.
Kushandiswa kwechigadzirwa ichi kunotendera kutevedzera nezvazvino SMPTE zviyero uye mazano ekutsvaga kutarisa mamiriro enzvimbo.
6500K - Yakagadzirwa D65, iine iyo Colourgrade Mk2 SMD chip
Makumi matatu ehupenyu maawa
110V AC 60Hz kana 220v-230v AC 50Hz (tinotumira ipaki yakakodzera zvichienderana nenyika yemutengi)
Beam angle 80 ° - 120 ° ine / isina hood
Inosanganisira North American 110v AC adapta
3 Year Yakatemerwa Waranti
5.0 Kubva pane 7 Ongororo
Unhu hwakanaka. Dhizaini yakanaka
Icho chigadzirwa chakakura.
Akanga anobatsira ichi? 2 0
Yakanakisa basa mwenje wekumanikidza mwenje kudzora
MediaLight's Desk Lamp ndiyo mhinduro yakanakisa yandakawana yekumisa mwenje wekhibhodi & mbeva nzvimbo yeiyo iMac Retina 5K's tafura nzvimbo. Iyo idiki, ine inochinjika-renji gooseneck, iri mukuenderana ne SMPTE zviyero zvekutarisa mareferenzi, uye inogona kudzikiswa zvakanyanya, zvichienzaniswa neumwe mugadziri we "chaiwo masikati" mwenje wedhesiki reLED, yandaishandisa. Ini handisi wekutepfenyura vhidhiyo nyanzvi, asi ini ndoda kushanda nezvishoma zvinokanganisa mune yakasviba kamuri. Ini ndoda kuita mavhidhiyo ekuisa paYouTube uye ndoda kuita yakakosha vhidhiyo kururamisa & grading. Ini ndine blackout drapes yekuchengetedza kunze kwezuva. Makamuri emakamuri akapendwa ≊ 18% isina kwachena grey (Munsell N5), uye ini ndinoshandisa mwenje wemabasa neMediaLight zvigadzirwa. Iyo Ideal-Lume® Pro neMediaLight Desk Lamp inoisa pasi zvakanyanya-inodzika, 6500K (CIE standard inopenya D65 "vhidhiyo chena") mwenje, weiyo yakakwira CRI, kwandinoida.
Akanga anobatsira ichi? 4 0
Rakajeka ruzivo pawebhusaiti. Mushure mekutenga, ndakagamuchira gadziriso ipapo uye mwenje wakatumirwa kuNetherlands nenzira yakanyatsorongedzwa. Kurumidza kuendesa uye zvakatonyanya kukosha: chigadzirwa chakanyatsogadzirwa chandinofanira kunge ndakawedzera mukamuri rangu rekutepfenyurisa kare. Yakakurudzirwa!
Akanga anobatsira ichi? 1 0
Ini ndinoshandisa rambi iri kurerekera mwenje nekuti ini ndaisada kubatanidza mwenje kune yangu yekutarisa. Inoshanda kwazvo nekuda kwechinangwa ichi! Kunyanya kushoma kwekuneta kwemaziso, uye zvinoita kuti chifananidzo chionekwe sechisikigo uye chinofadza.